Jumeira University - Higher Education abroad in Dubai, ny UAE
fanafohezan-teny : mazava ho azy
Créé : 2012
Aza adino ny discuss Jumeira University
Jumeira University dia ofisialy, fikambanana tsy miankina fampianarana ambony izay manomana ny mpianatra ho matihanina amin'ny asa Business, fanabeazana, Fahasalamana Sciences sy ny Silamo sy Arabo Fianarana.
Isika nanao ny fanomezana lenta sy manohana fianarana tontolo izay manaiky talenta sy mikarakara hetaheta.
Manome nanapaka isika lelan teknolojia toerana amin'ny safidy mba hianatra amin'ny teny Anglisy sy Arabo ary manome fampianarana samihafa sy ireo toerana fialana voly ho an'ny lahy sy vavy mpianatra.
Tongasoa eto amin'ny fampianarana mahafinaritra miaraka Jumeira University.
Ao amin'ny University Jumeira manaraka ny maha fomba fanabeazana mba hampivelarana ny mpianatra ho ampy fitaovana mba hanan-tombo olona amin'ny lafim-piainana rehetra, ary hita taratra ny fahitana fisainana ny Emirà Arabo Mitambatra.
Amin'ny alalan'ny akademika tsara, lalina fanajana ny soatoavina, fomba amam-panao sy ny fivavahana, ary koa ny nanolo-tena ho fianarana, tanjonay ny hitaona ny fanahinareo mba hanatanteraka ny fianarana ambony sy ny tsirim manokana ny feno.
Isika dia mirehareha ny amin'izay ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao. Ny zavatra inoantsika sy ny soatoavina no fehizoro vato ny fomba fampianarana maoderina tontolo manaiky ny soatoavina silamo sy ny fomba amam-panao eo an-toerana.
Ny mpianatra ao amin'ny University Jumeira, isika dia mampanantena ny tena fianarana traikefa. Izahay vao mahazo anao hieritreritra momba ny hoavy, hijery ny safidy sy hahatongavanao ho ilay olona te-ho: tompon'andraikitra, mahomby sy manan-danja ny fiaraha-monina mpandray anjara amin'ny.
Andao hiaraka aminay rehefa firotsahana amin'ny dia iray ny fianarana, baovao sy ny faniriantsika.
Official namany Sary: http://ju.ac.ae/
Ianao ve mila discuss Jumeira University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Jumeira University ofisialy Facebook